प्रमको नजरमा नपुगेको वेथिती – TajaNepal
Home /Blog/प्रमको नजरमा नपुगेको वेथिती
अदालतले सक्दैन वीर अस्पतालको लुट रोक्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भन्छन् भ्रष्टाचार रोकछु शुसान दिन्छु । तर चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालभित्र भएको अनियमितताको छानवीनका लागि सरोकारवालाहरु छटपटाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । अस्पतालमा करोडौ रकम भ्रष्टाचार भएको महालेखा प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर वीरका भ्रष्टहरु सबै एमाले परे प्रमले गर्छन के ? सरोकारवालाहरुले प्रधानमन्त्री अख्तीयार, स्वास्थ्यमन्त्री, राष्ट्रिय सतकर्ताकेन्द्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, छानवीनका लागि वैशाख १३ गते निवेदन दिएका छन् । भ्रष्टाचार विरोधी प्रेमले हेर्लान त यो ?
कांग्रेस पक्षधरका लुटाहाहरु र एमाले पक्षका खन्चुवाबीचको युद्ध त्यहाँ छ । निर्णय नभए पनि डाक्टर पढाइमा भर्ना गर्ने हिक्मतीला दिपक मुडवरी जस्ता भ्रष्ट पनि त्यहाँ छन् । उनी कांग्रेस हुन पदीय हैसियत अहेव हो । यो गिरोहलाई एमालेको टीमसँग लड्नु छ । त्यही कारण वीर अस्पतालको विरुद्ध कांग्रेसी फाँटबाट लगातार समाचार आउने गर्छ । विवादमा वायोभेड इन्टरनेशनल प्रा.लि. पनि यहाँ जोडिन्छ । वोलपत्र माग्दा १ सेट माग्ने सम्झौता गर्दा २ सेट माग्ने एक सेटको पैसा झ्याप पार्ने पनि त्यही रहेछन् । उपकूलपतिले स्वीकृत गरेको बोलपत्रमा एक सेट टिभी रेडियो थेरापी सिटी स्क्यान मेसिन १ थानको २० करोड ४९००,००० । – लाख उल्लेख छ । एक सेट यो वोलपत्र माग्ने २ सेट खरिद गर्दा दोब्बर रकम आशय पत्रमा थप्ने काम पनि भएकोले वोलपत्र विनाको काम गैर कानुनी भयो भन्दै पीडित पक्ष सञ्जु राजकर्णिकारले वीर अस्पतालको यो केश सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पठाए । अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे सदस्य लवराज श्रेष्ठ सदस्य प्रकाश पौडेलको समितिले समेत सुशासन सार्वजनिक जवाफदेहीता सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मनासिव नदेखेको जवाफ दिएको छ । यो केशमा हिमालयन मेडिटेक सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । उपकूलपति डा. गणेश गुरुङ्ग यो केशमा मुछिएका छन् । उनले अहेब विष्णु फुयाललाई सबै समान खरिद गर्न स्वीकृत दिए । यो २०७४ सालको कुरा हो । यो वर्ष रु. ३० करोड घोटला भएको छ । एमडी एमएसमा नाम निकाल्न रु. ३० लाख नर्सिङ्गमा ५ लाख घुस लिने चलन त्यहाँ छ ।
कार्यालय समयमै डा. राजेश चौधरी डा सन्तोष पौडेल डा. भोजराज अधिकारी डा. ध्रुव अधिकारी डा. अनिल बरालले बाहिर काम गर्छन् । यो केशमा उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ डिन मोहनचन्द शिवाकोटी सेवा आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल अहेवहरु विष्णु फुयाँल हिमालय तिवारी डिवी खनाल कास नवराज धिताल रेडियोग्राफर भक्तिमान सुब्बाले वीर अस्पताल सुधार्नु भन्दा आफू कमाउन तल्लिन भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।